किन लगाईन्छ हातमा हरिया चुरा र मेहन्दी ? - Akhabarpati.com
किन लगाईन्छ हातमा हरिया चुरा र मेहन्दी ?
२०७८ श्रावण १ गते, शुक्रबार प्रकाशित
१ साउन,नुवाकोट,–साउने संक्रान्तिको दिन लुतो फाल्ने चलन बिस्तारै हराउँदैछ । तर हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउनेको संख्या चाहिँ वषौँ पिच्छे बढ्दैछ । खासगरी महिलाले साउन महिनाभर हातमा हरिया चुरा र मेहन्दी लगाउँछन् । उसो त साउन महिना प्राकृतिक रुपमा पनि हरियो महिना नै हो । यो समयमा वन जगंल खेतवारी जताततै हरियाली छाउँछ ।
यतिबेला प्रायजसो सबै युवती र महिलाको नाडीमा काँचका हरिया चुरा सजिएको देख्न पाइन्छ । साउन लागेलगत्तै हिन्दू महिलामा छुट्टै उत्साह र उमंग छाएको छ । रातो, पहेँलो र हरियो चुरापोते तथा कपडामा सजिएका महिलाको मन्दिर र बाटोघाटोमा चहलपहल देखिन्छ ।
नेपाली संस्कृति अनुसार साउन १ गते विधिवत रुपमा लुतो फालेपछि हिलो मैलोको काम सकिएको भन्ने बुझिन्छ । तर पछिल्लो समय जलवायुमा आएको परिवर्तनले पहिले जस्तो साउन महिना लाग्दा खेति सकिएको छैन । अझ कतिपय ठाउँमा भरखरै खेतिको सुरसार हुँदैछ । धर्म संस्कृति मान्ने महिलाहरुमा मात्रै सिमित मेहन्दी र चुरा लगाउने परम्परा आज सबै जसो महिला र युवतीको फेसन जस्तै बनेको छ ।
साउनमा हरियो चुरा र महेन्दी नलगाउने महिला तथा युवती सायदै अब विरलै पाइन्छ । यो संस्कार अब एउटा कुनै भूगोल र जातजातिमा मात्रै सिमित छैन । हिन्दु संस्कार मान्नेहरु मात्रै हैन, हरेक प्रकृति प्रेमीहरु पनि आज साउनमा आफुलाई हरियो चुरा, हरियो कपडा र मेहेन्दीमा सजाउन लालायित देखिन्छन् ।
कतिपयले हरियो चुरा लगाइसकेपछि चुकाउनु या फुटाउनु हुँदैन भनेर यो महिनाभर होसियारी अपनाउने गर्दछन् । कहिल्यै हरियो चुरा नलगाउने युवतीले समेत चुरा लगाएर बजाउँदै हिँड्दा खुब सुहाएको र रमाइलो लागेको बताएका छन् । विवाहिताले पतिको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु र अविवाहितले सुयोग्य पतिको कामना गर्दै व्रत बस्ने चलन छ । यस महिनामा विशेष गरी प्रत्येक सोमबार महिला व्रत बस्छन् ।
पछिल्ला वर्षमा किशोरीमा समेत मेहन्दी र हरियो चुरा लगाउने ‘क्रेज’ बढेको छ । धेरैले धार्मिक विश्वासमा यसो गरेका छन् भने कतिले फेसनका रूपमा । खासगरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत र पूजा गर्ने चलन भएपनि साउनका सबै दिनलाई उत्तिकै महत्वका रूपमा लिइन्छ । हत्केलामा जति बढी गाढा मेहन्दीको रङ राख्यो, उति नै बढी श्रीमान्को माया पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । मेहन्दी लगाउने चलन भने छिमेकी देश भारतबाट भित्रिएको बताइन्छ ।
साउन महिना लागे सगैँ दाङमा पनि हरियो चुरा र मेहेन्दीको व्यापारमा उल्लेखनिय बृद्धि भएको व्यापारीहरु बताउँछन् । महिलाहरुले साउन महिना भरी नियमित रुपमा लगाउने प्रचलन नै बनेपछि हरियो चुरा र मेहेन्दीको व्यापारमा बृद्धि भएको हो ।
हरियो चुरा र मेहन्दी लगाएतका विभिन्न श्रृंगारका सामानहरुको राम्रो बिक्री राम्रो भइरहेको छ । पसलहरुमा हरियो चुरा र मेहेन्दी किन्नेहरुका बाक्लै उपस्थिती देख्न सकिन्छ । साउन महिनामा हुने हरियो चुरा र पोशाक प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा व्यापारीहरुले पहिले देखिनै त्यो उल्लेखनिय मात्रामा भित्र्याई सकेका हुन्छन् ।